Global Voices teny Malagasy » Vondrom-Pianatra Oniversite ao Kyoto Te-Hahita an’i Japan, Shina ary Korea ho ‘Happy’ [Faly-Miadana] · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Septambra 2014 13:08 GMT 1	 · Mpanoratra Keiko Tanaka Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Korea Atsimo, Shina, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Pikantsarin'ny “Japan China Korea Happy” nivoaka tao amin'ny YouTube tamin'ny 18 Jolay 2014
Tamin'ny fakana ny aingam-panahin'ny lahatsarin'ilay mpihira Pharrell William “Happy”, nisy vondrona mpianatry ny oniversiten'i Kyoto, Japan nahazo ny tanora tany Shina sy Korea tamin'ny alalan'ny hafatry ny fandriampahalemana sy ny finamanana, zavatra iray mbola itoloman'ny governemantan'ireo firenena telo ireo mafy mba hotratrarina.
Sumireko Tomita, izay naka ny andraikitra voalohany amin'ny fanatontosana ilay lahatsary “Japan China Korea Happy ” no nanapa-kevitra hampiroborobo ny finamanana teo amin'ireo firenena ao Azia Atsinanana ireo rehefa naheno ny tenim-pankahalana azon'ireo mponina ao an-tanànan'i Osaka raha teny an-dalana ho any an-tsekoliny izy, araka ny tatitra nataon'ny The Huffington Post Japan . Efa nihoatra ny 161000 ny isan'ireo nijery ny lahatsary, izay navoaka tao amin'ny YouTube tamin'ny tapaky ny volana Jolay.
Toy izao ny fivakin'ny fanavazavana momba ilay lahatsary ao amin'ny YouTube:
Notontosain'ny mpianatry ny oniversite maniry ny isian'ny fandriampahalemana eo amin'ny firenena telo ny “Japan-Chiina-Korea HAPPY”. Mety ho manana fifandraisana ara-tantara saropady ireo firenena telo ireo, saingy manao izay hamahana ny olana sy hanatsara ny fifandraisana amin'ny hoavy ny taranaka mbola tanora. Mampitsiky sy mampifaly ny olona ny lahatsari-kira ‘HAPPY’. Izany no nahatonga anay hanao ity lahatsary ity miaraka amin'ny tanoran'ireo firenena telo ireo. Noraiketina tany Japan tamin'ny ankapobeny ity lahatsary ity, saingy misy ihany koa ny clip nopihana tany Korea Atsimo sy tany Shina. Manantena izahay fa manampy amin'ny fampielezana ny tsiky sy mandrisika ny fanatsarana ny hoavy eo amin'ireo firenena telo ireo ity lahatsary ity.
Amin'ireo tsy teratany Japoney monina any Japan, dia ny Koreana no mandrafitra ny mponina be indrindra manerana an'i Japan, saingy i Osaka sy i Kyoto no tena betsaka azy ireo indrindra raha oharina amin'ny prefektiora hafa. Ho an'ny toerana nahasarika vahiny nihoatra ny iray tapitrisa  tamin'ny herintaona toa an'i Kyoto dia tsy hanao izay hampiroboroboana ny fanavakavahana sy ny fankahalana vahiny kosa i tanàna iray io.
Niarahana notontosaina tamin'ny vahiiny mpianatra ny lahatsary. Mihoatra ny zato ny nandray anjara tamin'izany ka ao ireo mianatra ao Kyoto ary ao ihany koa ireo mpianatra ampitan-dranomasina.
Naneho  ny heviny tamin'ny fijerena ny lahatsary i Muwa Yamada, Japoney mpianatra monina any New York :
Asehon'ireo tanora kolejiana ireo antsika ny fomba tsara atao hiatrehana ny olana maro misy eo amintsika. Mino aho fa ny andalana farany dia hoe miara-mifoka rivotra iraisana isika.
Efa nihoatra ny roa taona izao ny manampahefana avy ao Japan, Korea Atsimo ary Shina no nanao fifampiresahana avo lenta (ary namaky ny fahanginana ihany ry zareo tamin'ity herinandro ity nandritra ny fifampiresahan'ny visy minisitra tao Seoul hanamboatra ny fifandraisana). Noravahan'ny adin-tany sy fifandonana noho ny tantara  ny fifandraisana teo amin'ny firenena telo. Nifandona i Japan sy i Shina ny amin'izay tompon'ny Vondro-Nosy Senkaku (Shina manondro azy ho Diaoyu, Taiwan milaza azy ho Tiaoyutai ) , ary efa nifanditra ny amin'izay ho tompon'ireo nosikely Takeshima  (Korea manondro azy ho Dokdo) ihany koa i Japan sy i Korea Atsimo. Samy nisy fihetsiketsehana Anti-Japan sy anti-Koreana teo amin'ny roa tonta ka nahatonga fisian'ny fijerena ratsy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Mpisera YouTube iray hafa, “矢神悠希”[YAGAMI Haruki], nanasongadina  fa mahavita fisian'ny fahasamihafana ny tanora:
Hita fa voatariky ny governemantany tsirairay avy tafahoatra ny rehetra.
Fa raha vao mahatsiaro happy ny taranaka tanora, dia hiova ireo governemanta ireo.
Fa raha mbola mifampingerongerona ianareo, dia tsy hisy ny vahaolana.
Tsy tsara ny tsy mankasitraka ny lahatsary tsy misy fanaovana hetsika [hanatsarana ny fifandraisana].
Lasibatry ny tsikera sy ny fanehoan-kevitra ratsy fanahy manerana ireo firenena ireo ihany koa ny fampiroboroboana ny finamanana amin'ny alalan'ny lahatsary. Ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra ireo dia mitaritarika ilay fahatsapantena ho happy [faly-miadana-sambatra] amin'ny alalan'ny famelarana ny olana ara-tantara sy ara-diplomatika eo amin'ireo firenena ireo.
Des Moore, mpiserasera YouTube iray milaza ny mombamomba azy ho teraka Amerikana sy nihalehibe tany Japan, naneho hevitra  ho setriny, fa tsy mitera-bokatsoa ny fitondrana ny resaka any amin'ny politika:
Fa inona ny olan'ireo oloa mitondra ny raharaha any amin'ny resaka diplomatika sy tantara, raha manao izay hisian'ny fifanakalozan'ny sivily ao Japan, Korea ary Shina fotsiny ilay lahatsary. Tokony hiaina fiainana araka ny tokony ho izy ny olona monina any Korea na Shina, ary tsy manohitra amin'ny heriny manontolo amin'i Japan ny ankamaroan'izy ireo. Ny mahatonga ny fihetsiketsehana anti-Japan mitoetra ho lohatenim-baovao, dia noho ny fisian'ireny hetsika ireny ho tsy mahazatra na “normal”, ary tsy izy rehetra no mankahala an'i Japan. Milamìna ry rehetra ô!
Mety ho fotoana fanararaotra eo amin'ny governemantan'ireo firenena ireo hanesorana ny tsy fifankahazoana ny forum Fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ny Azia-Pasifika  (APEC) any Beijing sy ny vovonan'ny ASEAN  any Myanmar hoan'ireo Firenena Aziatika Atsimo Atsinanana miaraka amin'i Shina, Korea ary Japan amin'ny Novambra hoavy izao.
Nampian'i Aparna Ray sy L. Finch ny fanoratana ny lahatsoratra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/14/64130/
 vahiny nihoatra ny iray tapitrisa: http://sankei.jp.msn.com/life/news/140618/trd14061821460013-n1.htm
 namaky ny fahanginana ihany : http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140905000730
 adin-tany : https://globalvoicesonline.org/2012/11/08/senkaku-dispute-widens-gulf-between-japan-and-china/
 Vondro-Nosy Senkaku : http://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands
 naneho hevitra: https://www.youtube.com/watch?v=M74GPX8Xbfg&google_comment_id=z134ulzwxuuoclwt122ryxzqlt3ijpyed
 Fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ny Azia-Pasifika: http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Economic_Cooperation
 vovonan'ny ASEAN: http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Summit